Rafitra antso an-tariby tsy miankina amin'ny alàlan'ny OMG [EA008-CMU] | Vahaolana OMG
Rafitra antso amin'ny mpitsabo mpanampy tsy miankina amin'ny OMG Low Cost [EA008-CMU]
Vahaolana vidy mora vidy
Ny rafitra antso ho an'ny mpitsabo mpanampy tsy misy tariby dia manome fanaraha-maso CordLess® / Wireless tsy misy vidiny sy mahomby. Mety ho an'ny hopitaly, trano fitaizana be antitra & trano fonenana. Azo ampiasaina ho mpanara-maso fampitandremana mpikarakara amin'ny tontolo hopitaly vondrona.
Ny fanairana Economy CordLess® dia tsotra ampiasaina. Ny Central Monitoring Unit dia azo apetraka ao amin'ny tobin'ny mpitsabo mpanampy mba hampandre ny mpikarakara rehefa mila fanampiana ny mponina. Ny mpikarakara dia afaka manara-maso fitaovana maro amin'ny toerana afovoany miaraka. Ity CordLess® Fall Prevention Alarm ity dia miasa miaraka amin'ny bokotra fiantsoana mpitsabo mpanampy, sensor sensor, ary ny CordLess® Weight Sensing Pressure Pads sy ny gorodona.
Esory avy amin'ny efitrano ny rivo
Ireo mpikarakara dia mora vakina miaraka amin'ny hazavana mamirapiratra izay azo jerena avy lavitra. Ny fanangonam-bozaka malefaka dia tsy hanaitra ny mponina na hanelingelina ny hafa ary manolotra ny fisorohana QUIETER. Ampiasao ny efitrano ivelan'ny trano ho an'ny vahaolana mangina kokoa.
Mora manangana sy miasa.
Volabe miovaova - Ny ala fisorohana fisakanana dia manana fihenam-bidy ambany, midina ary ambony ary milamina tsara.
Ny Central Monitor dia azo apetraka eo amin'ny toeram-piantsonana mpitsabo mba hampandrenesana ireo mpikarakara mpikarakara rehefa mila fanampiana ny mponina.
Ny fanairana amin'ny fiantsonan'ny mpitsabo mpanampy na ny toerana afovoany amin'ny haino aman-jery sy ny fampisehoana dia manondro hoe avy aiza ny tompon'ilay fanairana
Ny mpikarakara dia ampahafantarina amin'ny mpikarakara mpikarakara ihany koa.
Ny bokotra famotsorana antso an-tariby dia mamela ny mponina hiantso ny mpikarakara amin'ny fotoana rehetra, ahafahana mivezivezy amin'ny Central Monitor sy ny mpitsabo mpanampy amin'ny fotoana iray ny fampiatoana an-tserasera, dia azo aleha eo amin'ny solaitrabe na entina amin'ny lanyard.
Miasa miaraka amin'ny bokotra fiantsoana, fihetsiketsehana señsor ary tadin'ny tsindry CordLess® ary tsihy amin'ny tany - Hatramin'ny efapolo (40) bokotra / bokotra fiantsoana no azo ampiasaina miaraka amin'ny fanairana iray.
25422 Total Views 8 Views Today
EA046 - OMG Wireless Calling System miaraka amin'ny…
EA061 - Rafitra Fanairana Wireless Motion Sensor an'ny OMG Wireless